Chii chekuita nezve zvinogona kugadziriswa muna 2018? | Ehupfumi Zvemari
Chii chekuita nezve zvinogona kugadziriswa muna 2018?
Imwe yezviitiko zviri kutariswa kune inotevera kurovedza ndiyo inogona kuvandudzwa pasi pesimba kugadzirisa. Izvi zvinoratidzwa nevanoongorora zvemari ve German Bank nekuratidza kuti sarudzo iyi inongova nyaya yemwedzi mishoma uye kuti ichabuda mune ino chiitiko chitsva. Saka chichava chiitiko chaunogona kusangana mukati memavhiki mashoma uye icho chinenge choda a nzira yakanyatsotsanangurwa kuitira kuti iwe ugone kubudirira mukuyedza kudyidzana nemisika yemisika. Pane zvakawanda zviri panjodzi munzira iyi ye2018.
Iyo yekuGerman yekuongorora imba inonongedza kuti avo ayo misika yemasheya muUnited States isina kutambura kudonha kwepakati pe3 ne5% mumwedzi gumi nembiri yapfuura, apo avhareji ndeyekuti inogadzira imwe yeizvi zvikamu mumwedzi miviri kana mitatu yega. Chinhu chimwe chinopa shanduko mune zvinoitika mumusika wemasheya. Parizvino, kubva kuDeutsche Bank vanosimbisa kuti zvigaro zvenguva dzose zvichaonekwa zvakare kubva gore rinouya. Mune chiitiko chinovimbisa chisina chokwadi zvichibva pane zvirevo zvevamwe veanoshanda zvakanyanya mubazi rezvemari.
Izvo hazvigone kukanganwika kuti kururamisa kwave kusiri kuve kwakajairika dhinomineta mumisika yemari gore rino. Iko kunonyanya kukosha masheya ivo vari kuzopedza gore mune yakanaka pfungwa. Chimwe chinhu icho vazhinji vevashambadzi vadiki nepakati varidzi vasina kunge pakutanga kwegore. Zvimwe chinhu chimwe chete icho chinogona kuitika zvinotevera kurovedza muviri? Kune angori mavhiki mashoma ekuona kana iri zano ringave rechokwadi kana, asi, misika inotipa kushamisika kutsva.
1 Kugadzirisa: maitiro ekuzvidzivirira?
2 Tora mukana kuvhura nzvimbo
3 Kuonekwa kwemabhaggog chaiwo
4 Yakasimba uye inosarudza kutenga
5 Kururamisa maficha
Kugadzirisa: maitiro ekuzvidzivirira?
Wakatarisana nemamiriro ezvinhu anoonekwa, chimwe chezvinangwa zvako chikuru ndechekugadzira matanho ekudzivirira kudzivirira kurasikirwa mumabasa ako. Ehezve, rinenge risiri basa rakareruka uye chero zvaro rinenge richida imwe nzira yekudzivirira. Semuenzaniso, iko kushandiswa kweinogara ichishanda mira kurasikirwa mirairo. Izvo zvinokupa iwe hukuru kutonga pamusoro pokuwa, uko kukosha kwemusika wemasheya kunogona kukura. Saka kuti nenzira iyi unorasikirwa, semuenzaniso, 3% panzvimbo ye8%. Mhedzisiro yacho ichave inoshanda kwazvo mukudzivirira zvaunofarira semudyari mudiki nepakati.
Ehezve, imwe sarudzo yauinayo muruoko rwako ndiyo iri kureva kune zvishoma kana kunyange zvachose kutengesa kana misika yemari ichipa yavo kutanga zviratidzo zvekushaya simba. Iyo ichave ndiyo yakanyanya kunaka nzira yaunofanirwa kudzivirira kupinda mukurasikirwa nemhepo iyo inogona kuumba inopfuura rimwe dambudziko kune yakatsiga yekuchinjana mari. Kuburikidza nekuvhiya kusingazoite sarudzo asi kukurumidza, kumanikidza uye kushanda. Kubudikidza nenzira dzakasiyana dzekudyara uye pakati pazvo kuongorora kwekutsigira uye kushora zvine chekuita nehunyanzvi kuongorora kwavo kwakamira. Uye zvakare, inogona kuve chishandiso chakanakisa kwauri kukwidziridza mashandiro mumisika yemari.
Tora mukana kuvhura nzvimbo
Kana chiri chekungoruramisa chete, chingave chokwadi bhizimisi mukana. Uye kutanga nemitengo inowanikwa mune ino chaiyo uye yakanyatso tsanangurwa mamiriro. Usakahadzike kuti zano iri rinogona kukubatsira kunatsiridza nzvimbo dzako kubva kunzira dzinoshanda kupfuura pakutanga. Pakati pezvimwe zvikonzero, nekuti iwe uchave nemitengo mukutenga kweanonyanya kukwikwidza masheya. Nezvidimbu zve2%, 3% kana kunyange yakakwira muzana zvine chekuita nemitengo yavo yazvino. Imwe yemhedzisiro yacho ndeyekuti mukana wekutenda unogona kunge wakakwirira kupfuura pasi pemamiriro akajairwa.
Kune rimwe divi, kutora chinzvimbo mumakiti mushure mekuumbwa kwekugadzirisa kunoreva zvimwe zvakanaka izvo zvinogona kuuya zvinobatsira mune zano rakagadzirwa kubva zvino zvichienda mberi. Semuenzaniso, kutora portfolio yekuchengetedzeka nemikana yakakura kupfuura pakutanga. Nekuti haugone kukanganwa kuti kuziva nzira yekumirira mumusika wemasheya nguva zhinji kune mubairo. Uye ichi chinhu chausingafanire kurega kana uchinyatsoda kukwidziridza chero rudzi rwekushanda mumisika yemari.
Kuonekwa kwemabhaggog chaiwo
Kuwana mikana chaiyo mumusika wekutengesa unogoneka kuburikidza nekugadziriswa. Usakanganwa kuti mafambiro aya anogadzira kukanganisa mumutemo wekupa uye kudiwa. Mutengo wakasimba kwazvo wakasarudzika semhedzisiro yekutengesa kumanikidza kubva kune vashoma nevapakati varimi. Mune zvimwe zviitiko pasi pekuwedzera kana kushomeka zvakanyanya. Asi mune mamwe mamiriro, kugadziriswa kwakasimba kunosvitswa uko kunogona kupa nzvimbo iyo kupinda mune yakanakira mamiriro kune vese. Izvo chaizvo izvi zviitiko zvaunofanirwa kutora mukana kuzviita kuchengetedza kunobatsira.
Aya ndiwo matanho akanaka kwazvo kune zvako zvaunofarira. Nemitengo isingafungidzike mira mishoma yekutengesa zvikamu zvakapfuura. Chaizvoizvo nekuda kwechikonzero ichi zvakanaka mirira kuti nguva yako iuye kupinda mumisika yemari. Iwe unofanirwa mune chero zvazvingava uve neropa rinotonhora kuti uite urwu rudzi rweakakosha mashandiro. Nekuti hazvisi nyore kushanda mune aya mamiriro. Asi pane zvinopesana, iwe unofanirwa kuzvitungamira pasi peakateedzana akanyatsotsanangurwa-nhungamiro kuzadzisa izvi zvinangwa. Kuti ivo havazoregererwe kubva kune chiito chakatarwa nechengetedzo yekushanda.
Yakasimba uye inosarudza kutenga
Chero zvazvingaitika, kana izvi zvigadziriso zvikaitika, zvinoshandira kuti hukama hwako nemisika yemasheya ive nehasha kupfuura zvakajairwa. Kubudikidza nekutenga kwakasimba kwazvo kunogona kukushandira iwe kuunganidza mazita. Kwete pasina, iwe unenge uri mumamiriro ezvinhu ane hukasha kuzadzisa chinangwa chaunoda. Asi chero bedzi iwe uchinyanya kusarudza mune zvako zvisarudzo. Iwe unofanirwa kusarudza zvirinani tsika uye usatarise pane chero chadzo. Kuti ugadzire iri zano rekudyara, iwe unenge usina imwe sarudzo kunze kwekuve kunyatso kuziva zvese zvinoitika mumisika yemari. Tichitarisa iko kushanduka kweakateedzana ehunhu hunogona kuve hwakanyanya kukurudzirwa kushanda navo.
Kana iwe ukasarudza iyi nzira yekushanda mumusika wemasheya, inofanira kunge iri kuburikidza nebasa uye nesimba izvo zvinoda kurairirwa kwakawanda. Nerubatsiro rwemachati ekuona chero kuputsa kwematanho akakosha mumutengo wawo. Iwe hausi kuzochiwana mumazuva mashoma, asi zvinogona kutora nguva yakareba yekuongorora. Zvichienderana nezviyero zvekusimba kwekugadzirisa uku nekuti hazvingagare zvakafanana. Asi zvazviri nezvazvo pakupera kwezuva ndizvo tenga nemitengo yakaderera. Chinhu icho chero mudiki uye wepakati murimari anoshuvira kwachiri, sezvazvinogona kuve iwe pachako kesi.
Kana chero kururamisa kuchionekwa nechimwe chinhu, imhaka yekuti inokupa iwe mutengo wekupinda mune zvirinani mamiriro. Asi zvinosanganisira akawanda akanaka mamaki ekuvandudza yako chaiyo chaiyo nzira yekudyara. Mupfungwa iyi, kune zvakawanda zvipo izvo zvinogadziriswa zvinogona kugadzirwa. Pakati pazvo pane zvinotevera izvo zvatinokufumura pazasi.
Kumanikidza kutengesa kwe mitengo iri kuderera zvishoma nezvishoma. Saka kuti nenzira iyi, iwo matanho akagadziriswa, ndosaka mutengo wemakambani akanyorwa uchiumbwa.
Aya mafambiro mhedzisiro ye kumuka kwakagadzirwa mumazuva apfuura. Nekuti iwe haugone kukanganwa kuti izvo zvinowedzera mumusika wemasheya hazvisi zvekusingaperi uye panofanirwa kuve nekucheneswa mukumanikidzwa kwemitengo.
Kugadziriswa anogara achidikanwa uye inogara nekusingaperi mukushanduka kwezvivakwa zvakanyorwa pamisika yemari. Kusvika pakuti ivo vanokura gore rega rega, kunyangwe akati wandei nguva mune dzino nguva.
Njodzi yekuti kururamisa kwakasimba kunogona kuburitsa ndeyekuti pakupedzisira inopera muna Shanduko yemaitiro. Saka zano racho rinofanira kunge rakasiyana zvakanyanya neyawave uchichengetedza kusvika parizvino.
Kutengesa pakati pekugadziriswa zvirokwazvo chiitiko chakaomarara uye icho chinoda a kuenderera mberi nekudzidza kupinda nekubuda mumisika yemari. Havasi vese varairidzi vanozokwanisa kuvandudza avo ekudyara nzira.
Basa rakajairika kwazvo mukugadzirisa rinobva pakusiya zvinzvimbo mukati memazuva mashoma dzokera muhomwe. Asi ino nguva iri pasi pemamwe akagadziridzwa kana emakwikwi mitengo.
Chero zvazvingaitika, kururamiswa kwemitengo kunosanganisira a shanduko yakakura mumazano Kugadzira. Mupfungwa iyi, inogona kubatsira iwe kujairana nezviitiko zvitsva izvo misika yezvemari iri kutara.
Iwe unofanirwa kugara uine tariro munzira yako kuhukama hwako neakakosha. Kuti izvi zvive zvakadaro, haufanirwe kukanganwa kuti kururamisa kunoreva mikana mitsva yebhizimisi. Iko kwaunogona kuti zvipo zvako zvemari zviwedzere kubatsira. Kuburikidza nemhando itsva dzekudyara.
Uye pekupedzisira, mamiriro ezvinhu aunofanira kunge uchifanira kuita nawo garai pamwechete kubva panguva dzino. Saka iwe unofanirwa kuziva kuti mafambiro akakosha aya anokura sei.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Chii chekuita nezve zvinogona kugadziriswa muna 2018?
Stock market chinangwa che2018: 11.000 mapoinzi